अपहरणकर्तासँग प्रेम गरेर ज्यान बचाउने मोडल एलिंग | Rajmarga
अपहरणकर्तासँग प्रेम गरेर ज्यान बचाउने मोडल एलिंग
बीबीसी। मोडल क्लोए एलिंगलाई गत वर्ष इटलीमा ६ दिनसम्म बन्धक बनाएर राखिएको थियो। तर जव उनी बेलायत फर्किन् तब उनको भनाइप्रति धेरैले शंका गरे। उनले बीबीसीको भिक्टोरिया डर्बिशर कार्यक्रममा आफ्नो पूरै कहानी सुनाइन् र आफ्नो भनाइमा शंका गर्नेलाई कडा जवाफ दिइन्।
दुई दिनसम्म कोठामा बन्धक जीवन बिताएकी क्लोएले अपहरणकर्तासँग एउटै ओछ्यानमा सुत्न तयार भइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले जति धेरै कुरा गर्यौं, त्यति नै हामीबीच गहिरो मित्रता भयो। मलाइ के लाग्यो भने उसले मलाइ मन पराउन थाल्यो। र मैले त्यसलाई मौकाको रुपमा प्रयोग गरेँ।’
दक्षिणी लन्डनमा बस्ने बीस वर्षीया क्लोए एलिंगका अनुसार गत वर्ष जुलाईमा ३० वर्षीय लुकाज हर्बाले उनलाई फोटोशुटकालागि मिलान बोलाएका थिए।
त्यहाँ पुगेपछि उनलाई केटामाइन ड्रगको इंजेक्शन दिइयो। कपडा खोलियो र हथकडी लगाएर एउटा ब्यागमा राखियो। त्यसपछि उनलाई गाडीको डिक्कीमा राखेर मिलानभन्दा १२० किलोमिटर टाढा एक फार्महाउसा लगियो।
एलिंगका अनुसार फार्महाउस पुगेपछि हर्बाले उनलाई यदि तीन लाख यूरो नदिने हो भने ‘यौन दासी’ का रुपमा बेचिदिने धम्की दिए।
‘मलाइ के लाग्यो भने उसले जे बोलिरहेको छ त्यो सत्य बोलिरहेको छ। मलाइ एक पलका लागि पनि उमाथि शंका भएन। किनभने मेरो सबै प्रश्नकोे विस्तारपूर्वक जवाफ दिइरहेको थियो,’ एलिंगले भनिन्।
तर, यही क्रममा हर्बाले एलिंगसँग सोध्यो, ‘के म तिमीलाई किस गर्न सक्छु। के हामी दुईबीच कुनै सम्बन्ध हुन सक्छ?’ एलिंग भन्छिन्, ‘तब मलाइ लाग्यो, मसँग यो राम्रो मौका आएको छ।’
एलिंगले अगाडि भनिन्, ‘मैले भविष्यमा केही हुन सक्ने बताएँ। उ निकै उत्साहित थियो। वास्तवमा उ मसँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्थ्यो। सधैं यही विषयमा कुरा गथ्र्यो। मलाइ पनि के लाग्यो भने त्यँहाबाट बाहिर निस्कन उसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ।’ जब हर्बाले आफूले माग गरेको फिरौतीको रकम नपाउने थाहा पाएपछि एलिंगलाई मेलानस्थित बेलायती वाणिज्य दूतावासको बाहिर लगेर छोडिदिए।
‘यो कुरा तपाइँलाई विचित्रको लाग्न सक्छ। तर तपाइँ यस्तो व्यक्तिसँग किन मूड अफ बनाउनुहुन्छ? जो तपाइँलाई मन पराउँछ र आफ्नो भावनाका कारण तपाइँलाई स्वतन्त्र गरिदिँदैछ,’ एलिंग भन्छिन्। उनी अगाडि भन्छिन्, ‘मैले त्यस्तो सबै कुरा गरेँ, जुम म उनको प्रेम पाउन गर्न सक्थेँ।’
मिलानको अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई पूरा भएपछि पोल्याण्ड नागरिक हर्बालाई १६ वर्षको जेल सजाय भयो। आफ्नो बचाउमा हर्बाले अदालतमा आफूले एलिंगसँग पहिला पनि भेट गरेको र एलिंगसँग आफूलाई प्रेम हुन थालेको बताएका थिए।
हर्बाले के पनि दाबी गरेका थिए भने आफूले कुनै स्क्याण्डल गरेर एलिंगको प्रचार गर्न चाहेको ताकी त्यसले उनको करियरमा सहयोग मिलोस भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताएका थिए।
एलिंग भन्छिन्, ‘मैले अहिले पनि उनको उद्देश्य बुझ्न सकेकी छैन्। उसले दुई वर्ष पहिला मलाइ फेसबुकमा एड गरेका थिए। उनले मलाइ रोज्नुको पछाडिको कारण पैसा मात्रै हुन सक्दैन। उनले लामो समयदेखि मलाई पिछा गरिरहेका रहेछन्। त्यसको पछाडिको कारण म प्रतिको आकर्षण थियो की!’
हर्बाको कब्जाबाट छुटेर बेलायत फर्किएपछि आफ्नो घर बाहिर उनले टिभी पत्रकारसँग कुरा गरेकी थिइन्। एलिंग निकै खुशी देखिएकी थिइन्। उनको हाउभाउ देखेर केही मानिसले उनको आलोचना पनि गरे। उनले जुन कपडा लगाएकी थिइन्, त्यसको पनि आलोचना भयो। एलिंग भन्छिन्, ‘म आफ्नो घर फर्किँदा निकै खुशी थिएँ। किनभने मलाइ घर फर्किन पाउँछु जस्तो लागेको थिएन।’ उनी विमानबाट उत्रिएर सिधै घर पुगेकी थिइन्। त्यस क्रममा उनले टप शर्टस लगाएकी थिइन्।
‘म पत्रकारको नजिक गएकी थिएँ। त्यसो गर्दा पत्रकार त्यहाँबाट जान्छन् भन्ने मेरो बुझाइ थियो। तर त्यस्तो भएन। मानिसले मलाइ सधैं रोइरहेको हेर्न चाहेका रहेछन्। म क्यामेरा अगाडि नआउन् भन्ने चाहेका रहेछन्। म त्यस्तो पनि गर्न सक्थेँ। तर फेरि मैले के सोचेँ भने त्यसो गर्दा मेरो आत्मविश्वास बढ्छ? यो विषयमा कुरा गरेर मानिससँग आफ्नो कुरा साटासाट गरेर आफ्नो आत्मविश्वास बलियो बनाउने कोशिश गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्।
एलिंगले आफ्नो अनुभवको आधारमा किताव पनि लेखिसकेकी छन्। उनले हबालाई दोषी कारण गरिसकेपछि पनि आफूमाथि शंका गर्नु हास्यस्पद रहेको बताइन्। उनले आफ्नो धेरै अलोचना महिलाले नै गरेको गुनासो पनि गरिन्। त्यसकालागि संचारमाध्यमले भूमिका लेखेको उनको आरोप छ।
Previous post: महोतरीको पाटुदेखी बर्दिबाससम्म सडक असुरक्षित बन्दै, महिलाहरु बजार जान डराउछन
Next post: यी हुन् विश्वका ५ चर्चित यौन बजार
ग्राण्डी अस्पतालको छतमा सिम्रिक एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटना